Taariikh Nololeedkii Iyo Fankii Abwaanka Weyn Siciid Maxamed Oo Loo Yaqaano Siciid Harawo – Qalinka: Ibraahim Cali | FooreNews
Home Aragtida Dadweynaha Taariikh Nololeedkii Iyo Fankii Abwaanka Weyn Siciid Maxamed Oo Loo Yaqaano Siciid Harawo – Qalinka: Ibraahim Cali
Taariikh Nololeedkii Iyo Fankii Abwaanka Weyn Siciid Maxamed Oo Loo Yaqaano Siciid Harawo – Qalinka: Ibraahim Cali
FoorenewsSep 18, 2017Aragtida Dadweynaha, wararka0
Waxaynu maanta halkan ku baranaynaa taariikh nololeedkii iyo fankii Abwaanka weyn ee Soomaaliyeed, Siciid Maxamed Harrawo, si aan wax uga ogaado noloshiisii fanka ka horraysay mar aan waraysi la sameeyay, waa uu ka gaabsaday inuu ii sheego gortuu dhashay iyo weliba halkii uu ku dhashay iyo sanadkii u fanka bilabayba . Waxaanu ii sheegay inuu diyaar u yahay ama uu ogal yahay, inaan la waddaago wixii xog ah eek u saabsab fankiisa, balse waxa aan xog ku helay oo ay dadkii ay aqoonta fican isku lahayeen ii sheegeen, inuu fanka bilaabay 1960-kii ilaa 1962 kii Siciid waxa u ka soo jeeda , gobbolka mudug, siiba koonfurta gaalkacayo.
Xiligaa uu Siciid fanka soo galay waxa uu ku bilaabay, tumista muusiga, gaar ahaan “ Giitaarka iyo Cuuddka’’ oo uu ku talax tagay, markii danbe badhtamihii lixdameedyaddii , Siciid iyo koox musition-ah, waxay ka tumi jireen muusiga cawaysyada ee Clubada waweeyana ee ay dadku ku cawayn jireen habeenkii. Waxanu abuuray kooxo ay ka so dheex baxeen dad wawweyn oo musitin iyo fananinba naoqday matrabad sareena ka gadahay sida Cigaal oo isagu u so gacan qabtay Salax,Jango, macalin Maysar, Axmed Naaji, Cumar shooli iyo dada badn oo kale Siciid waa Abwanaka ugu sareeya curinta misiga kulul iyo kan qabawba.
1967-dii waxa uu siciid noqday, mullax weyn oo sameeya codadka heesaha, kuwaas oo tiradooddu aad u badan tahay, halka heesahana aynu ku baran doonno, muddo ka bacdina waxa uu ku darsaday inuu noqdo hal-abuure sameeya midhaha iyo cododkaba, kuwaas oo uu meel sare ka gaadhay, kuna luqeeyaan fanaanin bulshadu ay aad u jeceshahay.
Haddaba haddii aynu isku dayno in aynu wax ka tilmaamno, heesaha uu codadkooda sameeyay iyo kuwa uu codadkoodda iyo midhahooddaba sameeyay, iyadoo ay dhici karto in aynu qaar garan weyno ama aan ilaawo , kuwoodda ugu caansan waxaa ka mid ahaa:-
1. Xaq miyaa xeer miyaa ee ku jirtay riwaayaddii Shabeel naagood, ‘ Joof iyo Maryam’eryada Xasan Sheekh Muumin 2..Ruuneey haweenku, riwaayaddii Talo iyo Talaaabo, erayadii Dheeg iyo laxankii Siciid.
3. Tumashadda hagaagsan.. waxa ayku jirtay riwayaddii ‘’ Yaxaas dhego duub “ Hibo iyo Maryan, erayadii Sangub
4. Calool nugulidaayeey iyo waa horre labadaa heesod oo ku jiray riaayaddii Jini iyo Jacayl, iyo heestii saddexaad oo uu iisheegay Xasan Ganay oo iyna ku jirtay riwayadaas, oo siciidna ilaaway anna iminka aanan xasuusnayn.
5. Caashaqu hadduu jiro hay cabanin, waxa ay ku jirtay riwaayaddii Dirqi maaha jacayl, Rooraaye iyo Khadra ayaa wadda qaada. Laxankana Siciid
6. Sida laama lowshaha, waxa ay ku jirtay riwaayaddii Saxibka Marna wa sadaka marna waa sabaabta waxaanna wadda qaada Rooraaya iyo Khadra. Eryada Mustafe Shekh Cilmi laxanka Siciid
7. Caashaqu ogaysiis ma leeeyahay, Khadra daahir, erayadii Cabdi Cali weyd iyo laxankii Siciid
8. Cabdoow beri samaadkii, Khadra erayadii Cabdi qafaar….
9. Ila girin-giri caashaqa, Qamar Cabdilaahi eraydii Huryo iyo laxankii Siciid.
10. Sirma qabe, Sahra Axmed, riwaayaddii Bad jacayl badanaa.. eraydii Maxmed Aadan Dacar, iyo laxankii siciid.
11. Wuu idaadaheeyaa.. Sahra Axmed, erayadii Huryo iyo laxankii Siciid.
12. Midabkeedda dhiinkaa Cigaal, erayadii Cabdicasiis Dakhare laxankanna Siciid.
13. Gar-qaaddo jacayloow.. eraydadda iyo laxankaba siciid.
14. Miidaamo Axmed Mooge, erayada Xasan Qawdhan, laxankna Siciid.
15. Sow ma liito..ma liito, codkii Maryan Mursal erayada iyo laxankaba Siciid.
16. Jacayl igu lamaanbaa…Maryan Mursal erayada iyo laxankaba waxaa leh Siciid.
17. Aragau waa I Abshiir. Maxamed Yuusuf Cabdi iyo Aamina Sahra
18. Taw-rada tan barakaysan..erayda iyo laxankaba Siciid ayaa lahaa.
19. Oktoobar waatee.. erayadeeda iyo laxankeedaba waxaa lahaa Siciid.
20. Haanneedaddiiyoow hore u wada.. erayadeeda iyo laxankeedaba waxaa lahaa Siciid.
21. Taariikh lama ilaawaan erayadeeda iyo laxankeedaba waxaa lahaa Siciid.
Waxaan aad ugu mahad naqayaa Siciid Maxamed Harrawo oo aan xoggtan ka helay, waana saaxiib joogto ah oo aan leeyahay, kaas oo inta badan iga caawiya xogaha ku saabsan, taariikh fanka. Siciid waa qof aad u shakhsiyad wanaagsan, oo muxtareim ah, lena dhaqan aad u wanaagsan. Ilaahyna waxan uga baryayay caafimaad iyo cimri dhereer.
Previous Post“Annagu Siyaasad Kama Shaqayno, Waxbarasho Ayaanu Ka Shaqaynaa Waxaanu Dhisnaa Tayada Ardeyga” ..Maamule Mahad Ibraahim Next PostMuwaadin Ka Soo Jeeda Deegaanka Gar’adag Oo Gaadhi LAND-CRUISER Ah Ugu Deeqay Xisbiga Waddani